Android: maitiro ekugovana nzvimbo yako uye mapaipi eGPS
Kuru Nhau & Ongororo Android: Maitiro ekugovana yako nzvimbo uye GPS zvinongedzo
Android: Maitiro ekugovana yako nzvimbo uye GPS zvinongedzo
Isu takaburitsa yakadzokororwa chinyorwa pamusoro penyaya iyi. Unogona kuverenga pano .
Heino mamiriro iwe iwe & apos; iwe wakambove wakasangana nawo, kungofanana neruzhinji rwevanhu vanogara mupuraneti: uri panzvimbo ino inotonhorera uye unoda kukoka boka reshamwari pamusoro, asi kuvapa madhairekitori pafoni zvinoratidza sekuoma sekudzidzisa katsi kuhukura. Kana iwe uri munzira kuenda kunzvimbo yekusangana uye iwe unoda kuti mumwe munhu arambe achicherekedza nzvimbo yako, kungoitira kuti vazive kana wave kuda kusvika ikoko.
Unozviita sei iwe nerubatsiro rwe smartphone yako? Zvakanaka, sekune zvimwe zvinhu zvakawanda, pane nzira dzinopfuura imwe dzekugovana makoeti ako nemumwe munhu, uye mune ino nzira-yekutungamira, isu & apos; ticharondedzera nzira dzinoverengeka dzekuita izvozvo pane Android smartphone.
Google Latitude yakavakirwa muGoogle Mepu, uye kunze kwekunge iwe uri newbie yeApple, pamwe wakambonzwa nezve chinhu chakamboitika. Iko kunyorera kunokutendera kuti uone nzvimbo yeshamwari dzako pamepu, uye zvinopesana. Chinzvimbo chavo chinogona kutariswa zvese zviri zviviri mbozhanhare, ingave iri smartphone kana piritsi, kana pakombuta kuburikidza neLatitude web interface. Hazvisi & apos; hazvitonhore here? Heano maitiro aunoishandisa:
Asi iyo ingori imwe yenzira dzekuudza vanhu kwauri. Pa peji rinotevera isu & apos; tichapfuura mamwe maviri maapplication anobatsira ayo anogona zvakare kuita kuti basa riitwe.
Peji rinotevera: Peji 2
maitiro ekugadzira tsika dzei iphone kesi
tarisa simuka mutambo online mahara
Tarisa uone chikonzero nei Sachigaro weFCC Pai akahwina & apos; bvumidza internet izwi kufona mundege
Apple iPhone 6 vs Sony Xperia Z3 Yakabatana
Apple & apos; s iPhone 11 Pro uye 11 Pro Max vari kutengeswa pamitero mikuru pasina kushambadzira-kunodiwa
Rini uye sei kufanoronga iyo iPhone 7 kana 7 Plus (Apple, Verizon, AT & T, T-Mobile uye Sprint)
PayPal iri kupa dhijitari iTunes makadhi echipo ane 10% kusvika 15% dhisikaundi
Apple iPhone 11 vs XR vs 8 Plus bhatiri bvunzo bvunzo, iwe unofanirwa kukwidziridza?
WebDriver Yakajeka, Yakajeka uye Inonzwisisika Mirira Mienzaniso
Google Chrome iri kuwana chinhu chinonyanya kukosha pane Android
HTTP Mamiriro Ekumira Nematsananguro
AT & T inoburitsa nyowani nyowani kune Samsung Galaxy S8 / S8 +, ona shanduko dzese nyowani